20 ส.ค. 2558 | 20,270 Views
13 Aug 2015 | 20,390 views ဒီနေ့တော့ နောက်ထပ်လနှစ်လကိုဆက်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်မသင်ခင်မှာ သင်ထားပြီးသား လတွေနာမည်ကို ပြန်ရွတ်ကြည့်ရအောင် January, February, March, April, May, June, July, August. အခုသင်ပေးမှာက September , October. ဒီနေ့အတွက် လက်တွေ့သင်ကြားမှုအစီအစဉ်လေးကတော့ ဆေးေ
13 Aug 2015 | 20,467 views စာသင်ပြီးပြီဆိုတော့ ပုံပြင်လေးနားထောင်လိုက်ကြရအောင်နော်။ ပုံပြင်လေးရဲ့အမည်ကတော့ မိန်းမပျိုလေးနဲ့ ကြက်မ ( The Young Girl and The Hen) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ A Young Girl lived onafarm with her parents. She loved to play with the farm animals. မိန်းမပျိုလေးတစ
04 Aug 2015 | 20,470 views စာလုံးသုံးလုံး အသစ်သင်ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနေ့အတွက် လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြရအောင်။ ဒီနေ့ပြုလုပ်မှာကတော့သက်တံ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ - ဂွမ်း၊ ရောင်စုံခဲတံ၊ အ၀ိုင်းပုံညှပ်ထားတဲ့ရောင်စုံစက္ကူသေးသေးလေးတွေ၊ ကော်နဲ့ ကပ်ထူစက္ကူတစ်ခု တို့ပဲဖြ
04 Aug 2015 | 1,442 views ဒီနေ့အတွက် စာသုံးသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Desert - သဲကန္တာရ ၊ Beach - ကမ်းခြေ၊ Ocean - ပင်လယ် တို့ကို သင်ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနေ့အတွက် လက်တွေ့သင်ကြားမှုလေးစလိုက်ရအောင်။ ဒီနေ့လုပ်မှာကတော့ ရေသန့်ဘူးထဲက ပင်လယ်လေးပါ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ - ရေသန့်ဘူးတစ်ဘူး၊ လက်ဆောင်ပစ္စည
English is Fun (Episode 176)
24 Jul 2015 | 1,214 views English is Fun (Episode 176)
05 Feb 2021 | 21,255 Views
English is Fun (Episode 175)
24 Jul 2015 | 1,267 views English is Fun (Episode 175)
English is Fun (Episode 174)
23 Jul 2015 | 1,225 views English is Fun (Episode 174)
English is Fun (Episode 173)
23 Jul 2015 | 1,214 views English is Fun (Episode 173)
ข่าวทั้งหมด9ข่าว 1 หน้า